စစ်တလိုင်းငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
စစ်တစ်လိုင်းငှက်ကို ချောင်းတလိုင်းဟူ၍ လည်းခေါ်သည်။ ထိုငှက်သည် တစ်တီတူးနှင့်အတူ 'ဗင်နယ် လင်နေး' မျိုးရင်းခွဲတွင်ပါဝင်သည်။ ပါဏဗေဒအမည်မှာ 'ဟော့ လော့တာရပ်စပိုင်နိုဆပ် ဒျူဗိုး ဆဲလီ' ဖြစ်သည်။ အလျား ၁၂ လက်မရှိ၏။ တောင်ပံတွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း အတက်ပါရှိ သည်။ ထိုအတက် ကို နားနေခိုက်တွင် မတွေ့မြင်ရချေ။မည်ကဲ့သို့ အသုံးချမှန်းလည်း မသိရသေးချေ။
စစ်တလိုင်း၏ အသံမှာ တစ်တီတူး၏ အော်သံနှင့်တူသော် လည်း တစ်တီတူးအသံလောက် မစူးရှပေ။ စစ်တလိုင်းသည် သဲထူထပ်သော မြစ်ကမ်းပါးတွင် ကျက်စား၏။ မြစ်ရေကြီး သောအခါတွင် ဥယျဉ်နှင့် မြက်ခင်းပြင်များသို့ ရွေ့ပြောင်း၍ နေ၏။ ရေကူးကျင်လျင်၏။ ယင်းကိုတောတွင်းရှိ ချောင်းများ တွင်တွေ့ရသည်။
စစ်တလိုင်းငှက်ကလေးများသည် နွေရာသီတွင်ပေါက်ကြ သည်။ အသိုက်ကို ကမ်းစပ်သဲမြေတွင်၎င်း၊ ကျောက်စရစ် အကြားတွင်၎င်း၊ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ တစ်မြုံလျှင် ၃ ဥမှ ၄ ဥအထိရှိ၏။ ဥမှာ တစ်တီတူး ဥနှင့် တူသော်လည်း အနည်း ငယ် ပိုရှည်၍၊ အညိုရောက်များသည်။
ထိုငှက်မျိုးကို အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ အင်ဒိုချိုင်းနားနိုင်ငံများ တွင်တွေ့ရ၏။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြစ်ချောင်းများ၌ ကျက်စား လေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တောင်များပေါ်၌ တွေ့ရသည်။ မေမြို့ရှိ ရေကန်များ၌လည်း တွေ့ရတတ်သည်။
↑ BirdLife International (2012). "Vanellus duvaucelii". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စစ်တလိုင်းငှက်&oldid=550162" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၇:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။